भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र हो । मित्र राष्ट्र होइन ।। (भिडियोसहित) | Emountain TV
माघ ६ २०७७, मंगलबार
भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र हो । मित्र राष्ट्र होइन ।। (भिडियोसहित)
मंसिर ११, २०७७ पढ्न १० मिनेट
नेपालमा एउटा ठूलो भ्रम अहिले पनि छ, त्यो के भने भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र हो कि मित्र राष्ट्र हो भन्ने । नेपालको भू–भागलाई तीनतिरबाट घेर्ने भारतीय मानचित्रलाई नेपालले नचाहेर पनि छिमेकीको रुपमा इन्कार गर्न सक्दैन । भनिन्छ, छिमेकी फेर्न मिल्दैन । यही भौगोलिक अवस्थाकै कारण जबर्जजस्ती मित्र राष्ट्रको दर्जा दिनु पर्दाको कुटनीतिक अवस्था बाहेक भारत नेपालको मित्र राष्ट्र कहिल्यै बन्न सकेन ।
भौगोलिक सीमाले मात्र मित्र राष्ट्र बनाउँदो रहेनछ । भौगोलिक सीमाको र भौगोलिक अवस्थितिको भरपूर लाभ उठाउँदै भारतले नेपालप्रति गरेको व्यवहार वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल गरीब बन्नुको प्रमुख कारण नै बनेको छ । भारतले कहिल्यै पनि अन्तरआत्माले नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्र मानेको छैन । कुटनैतिक मञ्चहरुमा जस्तोसुकै शव्दावली प्रयोग गरेपनि भारतीय अनुदार शासन सत्ताको अगाडि नपाल भारतको कुनै एउटा शासन संरचना भन्दा बढी मान्ने सोचमा छैन । यही भारतीय मनोदशाकै कारण नेपाल अहिले प्रताडित छ, संकुचित छ, परावलम्बी छ । साँच्चै भन्ने हो भने भारतकै इसारामा उठ्नु पर्ने र सुत्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ ।
नेपाली शासकहरुलाई उनीहरुको मनोविज्ञान अनुसार भारतले हरेक समय र सन्दर्भमा आफ्नो कार्य कुशलता प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई हर प्रकारले जकड्याउन भारतीय सत्ता सफल रह्यो, अहिले पनि सफल नै छ । एउटा छिमेकीले मित्र राष्ट्रको व्यवहार गर्ने हो भने नेपालको आफ्नो सार्वभौमिकताको भरपूर सदुपयोग गर्न पाउनु पथ्र्याे, सीमा स्तम्भको रक्षा गर्न पाउनु पथ्र्याे, असमान व्यवहारको छनक पनि दिनु हुने थिएन । तर भारतले यसो कहिल्यै गरेन । भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राख्यो । सीमा स्तम्भ रातारात हटाउन थोरै पनि अप्ठेरो मानेन ।
अन्तर्राष्टिय मापदण्ड विपरीत ठूलाठूला ड्याम्पहरु बनाउँदै नेपाली भूभाग जलमग्न गराउनमा आफ्नो पुरुषार्थ देख्यो । कमजोर राजनीतिक वातावरणको लाभ उठाउँदै नेपाल भित्रको सबै प्राकृतिक संशाधनमाथि आफ्नो पकड जमाउन पटक्कै पछि परेन । आफ्नो देशको सामान नेपाललाई बेच्न अनि नेपालबाट निर्यात हुने सामान्य वस्तुमाथि समेत अनुदार आँखा संधै तेर्सायो । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउने पारवाहन सुविधालाई समेत राजनीतिको मोलमोलाईको विषय बनायो । पार्टी फुटाउनेदेखि जुटाउनेसम्म, नेता नेताबीचको झगडादेखि विभिन्न सम्झौताहरुमा आफ्नो कलुसित गन्ध दिंदै देशको राजनीति अस्थिर बनाउन सफल भयो ।
नेपालको सार्वभौमसत्तामै आँच आउने गरी भारतीयहरुलाई नेपाल भित्र नागरिक बनाउन टुप्पीदेखिको बल लगाउँदै निरन्तर दवाव दिइनै रह्यो । समानताका नाममा बुनिएका कथाहरु एकतर्फी रुपमा लादिए । सार्वभौम देशले आपूmलाई आवश्यक पर्ने सामरिक संशाधन समेतमा भारतको निगरानी हुनुपर्ने विचित्रको वातावरण एकतर्फी रुपमा लादिनै रह्यो ।
त्यतिमात्र होइन भारतको विषादीयुक्त तरकारीलाई समेत नेपालले परीक्षण गरेर भित्र्याउन नपाउने अचम्मको दानवीय व्यवहार प्रदर्शन गर्न समेत भारत पछि परेन । अनि कसरी भारतलाई नेपालले मित्र राष्ट्र भन्ने ? नेपाल भारत बीच भएका सन्धिहरुले समान हैसियत राखेको हो भने भारतको सामरिक विषयमा नेपालको कुनै भूमिका देखिन्छ ? भारत भित्रको प्राकृतिक सम्पदाहरुमा नेपालको कुनै भूमिका देखिन्छ ? भारत भित्र नेपालको कुनै भूमिका छ ? नेपालस्थित भारतीय राजदूतको नेपालमा निकै सक्रियता छ, नेताहरुसँग उठबस छ, भारतमा रहेका नेपाली राजदूतले पनि त्यस्तै सक्रियता र नेताहरुसँग उठबस गर्ने अवसर पाएका छन ? समानताको कुरा हो भने सानो ठूलो देशको मतलब नहुनु पर्ने हो, तर त्यस्तो छैन ।
नेपाल एकतर्फी रुपमा भारत प्रताडित देश हो । यसै प्रसंगमा झण्डै एक वर्षदेखि बिग्रिएको सम्बन्ध बनाउने सन्दर्भमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगला नेपाल आएका छन । यो अवधिमा नेपाल सरकारले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ । मित्र राष्ट्र, भाइभाइ, रोटीबेटी, यी सबै प्रकारका प्रसंगलाई दन्त्य कथा भित्रको सामान्य प्रसंगको रुपमा लिंदै अब सार्थक बहसमा आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । छिमेकीहरुको अगाडि घुंडा टेकेर कुटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउँछु भनेर सोच्नु सर्वथा मूर्खता बाहेक केही होइन भन्ने ज्ञान नेतृत्वमा पलाउन जरुरी छ । संधैभरी देखिने कुटनीतिका उराठलाग्दा भाषणहरुले देशलार्य कंगाल बनाइ सक्यो ।
अब देश छिमेकीको लुटाइबाट बच्नुपर्छ । हामी सार्वभौम देशको सार्वभौम सरकार हांै भन्ने उच्च मनोबल सरकारले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट मात्रै छिमेकीहरुसंगको नेपालको सम्बनध सन्तुलित र पारदर्शी बन्नुका साथै दुबै पक्षको हितमा भरपूर उपयोग हुन सक्छ । साथै सम्बन्धमा समेत नयाँ आयामको आशा गर्न सकिन्छ ।
राजनीति‐मा वर्गिकृतNepalandIndia, NepaliPolitics
सांस्कृतिक र धार्मिक केन्द्रहरु जोगाउने दायित्व सबैको हो : मन्त्री भट्टराई
सडक किनारमा सुतिरहेका मजदुरलाई ट्रकले किच्दा १५ जनाको मृत्यु
पाल्पामा श्रीमतीको हत्या गर्ने पुरूष पक्राउ
८० वर्षको उमेरमा नागरिकता पाउँदा खुसी
ओली निकट अनेरास्ववियूको भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न
कोराना नियन्त्रणमा अपेक्षा अनुसार सफलता हासिल नभएको डब्लुएचओको दावी
नेपाल भारत सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्रीको दृढता । प्रधानमन्त्रीको भनाइले भारत हल्लियो(भिडियोसहित)
नेपाल चीन र भारतको उच्च प्राथमिकतामा (भिडियोसहित)
संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
चीनका रक्षामन्त्रीको अर्थपूर्ण नेपाल भ्रमण । भारत र अमेरिकलाई विशेष चासो (भिडियोसहित)
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल स्वदेश फिर्ता